Akụkọ - Yantai Xinyang Eletrọniki 2019 Goddess Festival na Nchịkọta 2018 na ọgbakọ ịja mma
Yantai Xinyang Eletrọniki 2019 Goddess Festival na Nchịkọta 2018 na ọgbakọ ịja mma
Na Machị 8, 2019, ụbọchị Chukwu,
n'ụbọchị nke abụọ nke ọnwa nke abụọ, dragọn ahụ weliri isi ya elu,
N'ime ụbọchị narị afọ nke dragọn na ụbọchị Phoenix, ndị ọrụ niile nke Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. webatara ememme nke ha: Xinyang Electronics '2019 Goddess Festival na 2018 Nchịkọta Kwa Afọ na Mgbakọ ịja mma!
N'otu oge a na -eme ememme abụọ ahụ na ọkụ nke oge opupu ihe ubi, Yantai Longjingchun Hotel butere ikuku ikuku, juputara na nganga, ndị ọrụ Xinyang na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile. N'ọgbọ egwuregwu, nnukwu ihuenyo LED na -ama jijiji ma na -egosi isiokwu ogbako a: Jikọọ aka ịchụso nrọ ma mepụta otuto dị ukwuu!
11: 38 Na njedebe nke ngụkọ ọnụ, onye nnabata ahụ kwupụtara n'egwu mara mma nke "Xinyang Nabata Gị", ọgbakọ ahụ wee malite ịkwọ ụgbọ mmiri!
Maazị Jiang Shiliang na -ekwu okwu
Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. na -agbaso ụkpụrụ isi nke ịkwụwa aka ọtọ, ilekwasị anya, ekele na ihe ọhụrụ kemgbe e guzobere ya, ma na -akwado mmụọ nke iguzosi ike n'ezi ihe, nraranye, na ịchụso ihe kacha mma, ma na -aga n'ihu na -agbasa ahịa. imepụta ọnụ ahịa maka ndị ahịa!
N'ileghachi anya azụ na 2018, ndị otu Xinyang gara n'ihu na -eto ma ụlọ otu ya na -aghọwanye nke zuru oke. N'okpuru iduzi ndị ọrụ na ndị ọrụ, Xinyang gara n'ihu na -aga n'ihu mmụọ nke nka, na -aga n'ihu, ma na -agba mbọ maka izu oke. Ọ mepere ahịa mba ofesi nke ọma wee nweta uru mmepụta ihe karịrị nde 100, ndị ọrụ ya nwere obi ụtọ. Nrọ ekepụtala ọkwa kachasị na ụlọ ọrụ ahụ!
2018 onyinye ndị ọrụ pụtara ìhè
2018 Magburu onwe Cadre Awards
Ihe nrite nke atọ nke 2018 General Manager Innovation Award
Ihe nrite nke mbụ na nke abụọ nke 2018 General Manager Innovation Award
Maazị Jiang kesara achịcha ahụ
Na -eme emume ncheta afọ 70 nke ala nna na 2019, ndị ọrụ Xinyang ga -eji mmụọ ime ihe n'eziokwu, nraranye na ịdị mma iji mezuo ebumnuche azụmahịa nke nde 180, nye onyinye nye nnukwu nne, wee mepụta amamiihe ọhụrụ! Anyị nwere ekele maka ibi n'ime ọmarịcha oge a, anyị nwekwara ekele maka ịnwe ikpo okwu Xinyang! Mmiri na -asọba n'oké osimiri, elu nnụnụ na -efe efe. Ihe Xinyang Electronics na -enye ndị ọrụ abụghị naanị nkwa nke ihe, kamakwa nkọwa zuru oke nke ụwa ime mmụọ.
Ịgba egwu ụlọ ọrụ ịgba egwu-n'ime oge ọhụrụ
Ogbako omumu ihe omumu ihe-onye ọ bụla na-akwọ ụgbọ ala ma na-anya nnukwu ụgbọ mmiri
Ahịrịokwu atọ na ọkara nke ndị ọchịagha ochie Xinyang wetara - Xinyang Brilliant
Ịgba egwu nke ndị otu na -eto eto wetara na ụlọ ọrụ na -akpụzi injection - mụta ka esi ebe akwa
Ngalaba na -ahụ maka ndị ọrụ nchịkwa Solo -Nationality Youai
Ihe omumu ihe omumu nke ihe omumu
Ngalaba na -ahụ maka njikwa ogo Solo -kamel
Egwuregwu ụlọ ihe nkiri - Dance India
Ọgbakọ ụmụ nwanyị Chorus - Ngọzi 365
Ndị na-ahụ maka ọfịs-Douyin Dance Skewers
Ihe osise ụlọ ọrụ ihe osise-chi nwanyị na nwoke
Ngalaba Njikwa Ogo na-abụ abụ ma na-agba egwu-mụ na ala nna m
Maazị Jiang Solo Solo — Malite
Ogbako akpaaka na-akpaghị aka-ezigbo mmalite
Egwuru egwu Dance-Black and White Legs
Ịgba egwu agịga agịga —malite inwe obi ụtọ
Egwuregwu Egwuregwu Electromagnet — Onye ọ bụla nwere obi ụtọ
Nzukọ kwa afọ agwụla, onye ọbịa na Maazi Jiang na -ese foto otu
Foto otu na ndị ọbịa
Daalụ ndị ọbịa niile na ezinụlọ Xinyang. Ka anyị gaa n'ihu n'ọ joyụ anyị ma dee otuto anyị na Xinyang. Afọ ọhụrụ amalitela. Njem ọhụrụ, ngọzi ọhụrụ na atụmanya ọhụrụ. Anyị juputara na nganga na ibu ọrụ na Xinyang. , Weta ọchịchọ anyị ikele echi ka mma! Ịhụnanya dị na Xinyang ma ọ siri ike ịpụ. Anyị niile na -atụ anya izute ọzọ na 2020! Gọzie Xinyang na -ama mma mgbe niile!
Oge nzipu ozi: Mar-08-2019